Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): March 2014
92/%ပြည် သူဆန္ဒသေနပ် နာဂစ် ဖွဲ စည်းပုံ ကာ ကွယ် ရေlးမင်းအောင် လှိုင်ထံသို့(DVB)
at 3/31/2014 11:55:00 AM
Post by Hanhtet Zaw.
at 3/31/2014 10:47:00 AM
Wungpawng Mung dan Shanglawt asuya KIO/KIA ni woi galaw ai hpe madi shadaw ga ai.
Ya na zawn myenayup tung jahpan hta na ahkang njaw ai gaw jaw dik sai.
Dai yup tung jahpan myen ni sa hta la jang an hte magam gun hte Myu tsaw ni yawngajahpan hpe myen nil chye mat mai ai,shan hte myen ni chye jang shan hte kam ai hku mai pale palau mai galaw ai,,
Bai nna an hte mung dan 30 janenga ai Kachin niajahpan mung dai KIO/KIAamasha jahpanean hte htap htuk dik hku mai bang da sai.shim sai.
မတ်လ ၃၀ ရက် ဒီကနေ့ကစပြီး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ သန်းခေါင်စာ ရင်းကောက်ယူနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ ကေအိုင်အိုထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒီလို သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်နိုင်တဲ့အတွက် ကချင်လူမျိုး စုစုပေါင်းရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ လူဦးရေ ၄ သိန်းလောက် စာရင်းပျောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်က ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်ခွန်ဂျာက ပြောပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါသွားတဲ့ လ၀က ၀န်ကြီးဦးခင်ရီက ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၆ ရက်မှာ ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခွင့်ပြုဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်ဆီကတဆင့် ပြောခဲ့ပေမယ့် ကေအိုင်အိုဘက်က ကြိုတင် ညှိနှိုင်းထားတာ မရှိလို့ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အနေနဲ့ ကေအိုင်အိုထိန်းချုပ် နယ်မြေတွေထဲ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ဖို့ကိစ္စ အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်ကတည်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ဖူးပေမယ့် တွေ့ဆုံခြင်း မရှိဘူးလို့လည်း ဒေါ်ခွန်ဂျာက ပြောပါတယ်။
အပြည့်အစုံ အသံဖိုင်နားဆင်ရန် - https://soundcloud.com/dvbradio/ksa-daw-khon-ghar-30032014
at 3/30/2014 12:47:00 PM
By-Ah Hpung's photo.
1. ပထမ အရွယ်မှာ စစ်ပြေးသိမ်းရှောင်
2. ဒုတိယ အရွယ်မှာ တိုက်ပွဲဆင်နွဲ့
3. တတိယ အရွယ်မှာ ရွာတွေမီးလောင် ကျောင်းတွေ ဖျက်ဆီး
4. အရွယ်ရောက်လာပြန်တော့လဲ လယ်သိမ်း ယာသိမ်း
ဘယ်မှာလဲ ဒီမိုဂရီစီ လမ်းကြောင်း
ထိပ်ပြောင် မင်းခေါင် ရာ ......
2014 03 Press Release the Elders Myanmar s Grassroots Should HaveaRole in National Reform Peace Talks
at 3/29/2014 06:49:00 PM
STATEMENT BY ARCHBISHOP CHARLES BO ON THE CENSUS PROCESS IN MYANMAR.
at 3/29/2014 06:47:00 PM
The first census process after reform measures are taken in this
country is taking place now. Despite various apprehensions expressed
by local people, especially the ethnic communities and well meaning
foreign observers, we welcome this process, hoping thatasincere,
transparent Census process isagreat opportunity for ushering peace
in this long suffering nation.
We understand the Census process paves waves for better planning in
development and peace. We are sure the government, with the help of
international community has launched into this ambitious project with
the intention of usheringaprosperous and peaceful future for every
citizen of Myanmar, especially the most vulnerable and the people in
We urge the government to ensure the following :
* The process should be totally transparent, strictly following
international standards, allowing local and international monitors
* The census teams comprised of men and women from all cultures
* That the process affirms the traditional culture, traditional
resource holding patterns and protect all cultural symbols and meaning systems
* That no attempt be made to change the demographic nature of any
area, making sure that all people areas that were traditionally
identified as ethnic areas are not diluted into other demographic
* That no attempt is made to change the three pillars of people's
existence : identity, culture and resources. These three form the
constitutive element of the ethos of the people and any attempt, overt
or covert, should be resisted in the interests of durable peace.
* Community assets form the soul of many communities. As such forests,
waters and land are questions that could provoke conflicts.
Sensitivity to local perceptions will pave the way for peace.
* This country isacountry of migrants and displaced people. They are
sons and daughters of this land. Efforts are made to wipe out their
memory and their possessions. Every effort must be made to enumerate
the details of these people and ensure that they return to their
* The documentation process needs to be robust, meeting international
standards, ensuring that all documents are finished at the ground
level without any scope of manipulation later away from the people who
underwent the census process.
Myanmar march towards peace and prosperity is an arduous journey. The
government and the international community should ensure that major
events like Census ensuresaconfidence building measure, instilling a
sense of belonging toanation, where justice and fair play ensures
the rights of the most vulnerable communities. Census offersagolden
opportunity for peace.
Any myopic attempt at circumvent this opportunity isarecipe for long
years of mutual suspicion and conflict. I do hope the sagacity and a
vision for peace and prosperity guides us all in this moment of truth.
YANGON--UNFPA, the United Nations Population Fund, is very concerned
about the mob attacks on international NGO and UN offices in Sittwe
yesterday, and supports the call by the UN Resident
Coordinator/Humanitarian Coordinator (a.i.) on the Government to
ensure the protection of the humanitarian and development community in
All UNFPA staff are accounted for and safe. UNFPA will retain
essential staff, and will continue to assess the need for any further
action as the situation develops.
UNFPA is concerned by reports linking the riots to mounting
tensions in Rakhine State in relation to the Myanmar census, which is
due to begin on March 30.
In accordance with international standards and human rights
principles, and as part of its agreement with the UN and donors, the
Government has madeacommitment that everyone who is in the country
will be counted in the census, and all respondents will have the
option to self-identify their ethnicity. This commitment cannot be
honoured selectively in the face of intimidation or threats of
Reliable census data can only come from an enumeration in which
the safety and security of enumerators and respondents is assured.
Respondents must feel safe to answer all questions freely, and
enumerators must be able to record the answers faithfully, without
Official actions to address security concerns during the census
must not compromise the commitment to uphold international standards
and human rights principles. Any measure adopted must guarantee the
right of all people to participate inacensus that is conducted in a
fair, inclusive and uniform manner in every state and for every
William A. Ryan, ryanw @ unfpa.org, mobile +66 89 897 6984; or
Malene Arboe-Rasmussen, arboe-rasmussen @ unfpa.org, tel. +95 1 5429
109 ext. 146, mobile +9592500 26961
at 3/29/2014 11:42:00 AM
By-Facebook ah hpu
စစ်တိုက်ခြင်းအရာမှာလည်း အရင်ခေတ်ကလို လူအင်အားအဓိက
နည်းပညာမြှင့်လာတာနဲ့အမျှ မြို့ တစ်မြို့  ကွင်းတစ်ကွင်း
ကို ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ပြာကျသွားစေနိုင်ပါတယ်၊၊ “လူ” ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ
ရဲ့  အစွမ်းပကားကို ကန့်သတ်ထားလို့မရနိုင်ပါ၊၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ အဲလောက်စွမ်း
မှာမဟုတ်ဘူး လို့ ပေါ့ပေါ့တွေးရင် ခပ်လေးလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊၊
လူမျိုးစုအခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေကို မျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်ဖို့
နောက်ဆုံး ခေတ်ကာလ ဖြစ်တယ်၊၊ နာကြည်းမှုနဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေ လွန်ကဲ
သွားရင်တော့ အလုံးစုံပျက်သုန်းဖို့ ရွေးချယ်သလိုဖြစ်သွားမယ်၊၊
ကျုပ်စိတ်ကူးကတော့ ကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားများဟာ “တာလီဘန်” တို့
လောက် အင်အားကြီးမယ်ဆိုရင် ဗမာအစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကို
မရမက လုပ်ပါလိမ့်မယ်၊၊ ကနေ့ အောက်ဗမာတွေ ဘယ်လောက်သေသေ
နေပြည်တော်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို မထိခိုက်သေးတဲ့အတွက် (ကိုယ့်အသက်နဲ့
ဝေးနေသေးသရွေ့ ) အထက်ဗမာတွေ ခပ်တင်းတင်းလုပ်နေတာပါ၊၊
မနေ့က ဗမာအကြီးအကဲ အားလုံးစုနေတဲ့ အခမ်းအနားမျိုးမှာ တိုက်ချင်းပစ်
ဒုံးတစ်စင်း မပစ်နိုင်ဘူးလား၊၊ ဗမာတံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ရဟတ်ယဉ်တစ်စင်း
ဖြတ်မပျံနိုင်ဘူးလား၊ အနုကြမ်းစီးလာတဲ့ တိုက်လေယဉ်တစ်စင်းလောက်
Updated with recent violence and security issue in Rakhine
at 3/28/2014 09:47:00 PM
FYI.. Dr. Kyaw Thu kaw nna shagun jaw ai re. Matut nna maja nga ga ai.
Hkungga let, Khon Ja
Pls be updated with recent violence and security issue in Rakhine and role
of civil society .
1. we are in touch with contacts from Sittwe , Bu Thee Taung and Maung Daw .
2. The case occurred on 26 and local CS leaders and Buddhist monks tried to
control the situation and managed to protect the INGO and UN staff
3. On 27th, it went out of control and all INGO and UN offices were
attacked and Gov helped evacuation. ( Note; some suspicion of hands behind
4. *Death of 13 old girl from gunshot was recently reported and tension
likely to become high.*( this afternoon is her funeral )
5. 13 staff from CARE in Bu Thee Taung are now with self evacuation plan
and I connects them with local CS leaders from Bu Thee taung and sittwe to
provide security ,reported to UN RC team, MPC, Rakhine Gov and also update
CARE office about measures.
6. I also contacted UN team in Maung Daw for evacuation . ( Note there are
some Expats in WFP team ) .
7. I also informed UN Country Representative, Nambia office, President
office and Rakhine Gov and MPC.
8. Regular contacts with civil societies in Sittwe
Brief Risk analysis
1, these violence are direct link to tension from census
2. violence is seemed like targeted against INGO , UN and foreigners but is
direct link to census ( where Rakhine see international are behind the
census to support Rohinjas )
3. Potential spread of tension to other areas particularly Ygn, MDL and
previous conflict affected areas.
4 . Rakhine community demand official apology from Gov for death ofa13
old girl - if Gov response is delayed or not clear, role of Buddhist monks
in Ma Ba Tha will be getting stronger and out of control
1. to discuss about mobilization of CSOs working on inter communal
conflict to monitor and report for early warning
Death ofagirl staying in her house from strayed bullet become a
very volatile issue.
Rakhine community more and more feel like Gov is not protecting them ,
in stead killing them.
They see that Gov is using census to allowing Rohinja in Rakhine.
They demanded official apology from Military as the gunshot was fired
But it is no chance for Military to apologize.
then Monks will come out to show their power and situation will be
very complex and out of control.
စစ်တွေမြို့ရှိ INGO နှင့် NGO များ ငှားရမ်းနေထိုင်သော နေအိမ်များကို
ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်မှု ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီး မတ် ၂၇ ရက်တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ အား
အချိန်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ အရေးယူမည်ဟု
မတ် ၂၇ ရက် နံနက်က စစ်တွေမြို့ ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက် ဂေါက်ရီလမ်းတွင်
ပြဿနာမဖြစ်ပေါ်စေရန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေရာယူထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
စစ်တွေမြို့ရှိ INGO နှင့် NGO များ ငှားရမ်းနေထိုင်သော နေအိမ်များကို
ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်မှု ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မတ် ၂၇ ရက်တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ အား
အချိန်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် မတ် ၂၆ ရက် ညပိုင်းက လူစုလူဝေးဖြင့် INGO နှင့် NGO များ
ငှားရမ်းနေထိုင်သော နေအိမ်များကို ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်
မတ် ၂၇ ရက်တွင်လည်း ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်မှု ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ INGO တစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးက
သာသနာ့ အလံကို ခါးတွင်ပတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ပြီး ခဲများဖြင့်
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည် မတ် ၂၆ ရက် ည ၁၂ နာရီခန့် ပြီးစီးသွားသော်လည်း မတ် ၂၇ ရက်
နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊ ဂေါက်ရီလမ်းရှိ
နိုင်ငံခြားသားများ တည်းခိုနေသော နေအိမ်ရှေ့သို့ ဒေသခံများ
ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံခြားသားများအား
ငှားရမ်းထားသည့် အခြားအိမ်များကိုလည်း ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့မှုကြောင့်
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီ
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင်က“မင်းဘာကြီးလမ်းမှာ INGO အဖွဲ့က
ငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့ အိမ်မှာ သာသနာ့အလံ လွှင့်ထားတာရှိတယ်။ အဲဒီမှာ
နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးက သာသနာ့ အလံကို ဖြုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလို
ဖြုတ်လိုက်တာကို လမ်းသွားလမ်းလာတွေက မြင်တယ်။ အဲဒါကိုပြောကြဆိုကြတော့
လူတွေများလာတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီဂိုဒေါင်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသူနဲ့
သူ့ယောက်ျားကို ထုတ်ပေးဖို့ ဒေသခံတွေက ပြောလာတော့ ခဲနဲ့ပေါက်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
ဒါကြောင့် ရဲတွေကခေါ်ပြီး ရဲရိပ်သာမှာ စောင့်ရှောက်ထားပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ည ၉ နာရီလောက်မှာ Malteser ရုံးတွေအပြင် တခြားရုံးတွေကိုလည်း
ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်မှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လူအုပ်က များလာတော့ ရဲတွေက
အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းတဲ့ လက်နက်တွေ ပစ်ဖောက်ပြီး လူစုခွဲခဲ့ရတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့ မရှိဘူးလို့ သိရတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ရတာတော့
သာသနာ့အလံကိစ္စလို့တော့ ထင်တာပဲ။ အရင်က AZG ကိုထွက်သွားဆိုတာလည်း ရှိနေတယ်။
အခုလည်း သာသနာ့အလံကို ဖြုတ်တယ်ဆိုတာ အိမ်ရှင်က သူ့အိမ်မို့ သာသနာ့အလံထောင်တာ
ဖြုတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး ထင်တယ်။ နိုင်ငံခြားသူကလည်း သာသနာ့အလံကို
ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ လုပ်ခဲ့တယ်ဆို သူတို့ကို မေးမြန်းရဦးမယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
မတ် ၂၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်လည်း ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်မှ
နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်တစ်အိမ်ကို ဒေသခံများက ခဲဖြင့်
ပစ်ပေါက်သည့်အပြင် အိမ်အတွင်းပစ္စည်းများကိုလည်း ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးမှု
စစ်တွေမြို့၌ မတ် ၂၇ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်မှုတွင်
ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့သဖြင့် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်
မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသော်လည်း ထိုသတင်းအတွက်
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံမှ အတည်ပြုချက် ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ ငှားရမ်းနေထိုင်သော နေအိမ်များကို
ခဲများပစ်ပေါက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေမြို့မှ မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးဖြစ်သူ
ဦးသန်းထွန်းက “သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာထည့်မယ် ကိစ္စအပေါ် ဒေါသထွက်နေတာ
ရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်က သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာလုပ်တဲ့
ကိစ္စကို ဒေါသမထွက်တဲ့လူ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စတွေဟာ သန်းခေါင်စာရင်း
မစတင်မီ INGO တွေကပဲ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်နေတာလို့ မြင်တယ်။ ၂၀၁၂
ပဋိပက္ခကလည်း INGO တွေ ကြောင့်ဖြစ်လာသလို အခု သန်းခေါင်စာရင်း
ကောက်မယ့်ကိစ္စမှာလည်း INGO တွေက လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်” ဟု
အလံဖြုတ်ယူခဲ့သူ အမျိုးသမီးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသူ Ms.Y Vonne Dunton (PP
No.214488402) ဖြစ်ပြီး Melteser အဖွဲ့မှ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းပြုမူခဲ့သော
အပြုအမူအတွက် မည်သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ရှိသည်ကို ပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန်ရှိ
သူများထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပေ။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဥက္ကံမြို့ အနော်ရထာရပ်ကွက်
ဥက္ကံဈေးအတွင်း အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် ကိုရင်လေး ရှင်ပုည၏ သပိတ်ကို
ဥက္ကံမြို့ပါးနီပြင်ကျေးရွာမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မ၀င်းဝင်းစိန်က ၀င်တိုက်မိရာမှ
ကိုရင်လေး၏ သပိတ်ကျကွဲပြီး ဥက္ကံ ပဋိပက္ခ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်
ပတ်သက်၍ ဥက္ကံပဋိပက္ခကို စတင်စေခဲ့သူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မ၀င်းဝင်းစိန်နှင့်
မခင်မာသိန်းတို့ နှစ်ဦးအား သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းစေမှု ပုဒ်မ ၂၉၅ (က) ဖြင့်
တိုက်ကြီးမြို့နယ် တရားရုံးက ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန် ၅ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီ
သို့ဖြစ်ရာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခြင်းအပေါ် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာ၌ တရားမျှတမှုအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိနေခြင်း၊
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အားနည်းမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့်
အခြေအနေများမှာ ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိကြောင်း ပြည်သူများအကြား
ယခုဖြစ်စဉ်များကြောင့် စစ်တွေမြို့တွင် ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့် ညမထွက်ရအမိန့် ည ၁၂
နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအစား ည ၆ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီသို့
စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရက
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်၍ လိုအပ်သော အရေးယူမှု
ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှတစ်ဆင့် မတ် ၂၇
ရက် ညပိုင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်း နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦး သာသနာ့အလံကို
မဖွယ်မရာလုပ်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်ရာမှ အကြမ်းဖက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားပြီး
ဒေါသထွက်နေသော ဒေသခံများက ကုလနှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်းများ၏
ရုံးနှင့်နေအိမ် ၃၀ ခန့်ကို ဖျက်ဆီး
*Published on:* Friday 2014-03-28
No.338 Friday, March 28, 2014 <http://www.7daydaily.com/issue/2014-03-28>
စစ်တွေမြို့တွင် ယူအင်န်နှင့် အိုင်အင်န်ဂျီ အို ရုံးအချို့နှင့်
ဝန်ထမ်းများ၏နေအိမ် များ ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ရန်ကုန်သို့
ပြန်ရောက်လာသော ဝန်ထမ်းအချို့ (ဓာတ်ပုံ− အေပီ)
အိုင်အင်န်ဂျီအိုတစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသူ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာ
ပြုလုပ်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ရာမှတစ်ဆင့် စစ်တွေမြို့ တွင်
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ်ဖြင့်
အကြိမ်ကြိမ် မိုးပေါ်ထောင်၍ ပစ်ဖောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မတ်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှ စတင်ခဲ့သော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများကြောင့် ကုလနှင့်
အိုင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းများ၏ နေအိမ်၊ ရုံးအဆောက်အအုံ ၃၀ ခန့်
ပျက်စီးခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၇၄ ဦးကို
လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက်ဖြင့် ထားရကာ အချို့ကို ရန်ကုန်မြို့သို့
ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် စတင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သော အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်း
နိုင်ငံခြားသူနှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းတို့ကို ရန်ကုန်သို့ ပို့လိုက်ပြီဟု
အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ စစ်တွေမြို့တွင်
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများကြောင့် မတ်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှစတင်၍ မတ်လ ၂၇ ရက် ညနေအထိ
လေးကြိမ်၊ လေးနေရာခန့် သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်၍ ပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့ရပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄
ညမထွက်ရအမိန့်ကို နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၆ နာရီအထိ အချိန်တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခင်က စစ်တွေမြို့တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ည ၁၂ မှ နံနက် ၆ နာရီထိ
မတ်လ ၂၆ ရက် ည ၆ နာရီကျော်တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ Malteser International မှ
နိုင်ငံခြားသူ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ၎င်းတို့ ငှားရမ်းနေထိုင်ရာ နေအိမ်တွင်
လွှင့်ထူထားသော သာသနာ့အလံကို ဖြုတ်ချ၍ ဘောင်းဘီခါးကြားထဲတွင် ထိုးထည့်ကာ
ထဘီကဲ့သို့ ပတ်သွားသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာရာမှ လူစုလူဝေး
စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသာသနာ့အလံသည် သန်းခေါင်စာရင်းကို
သပိတ်မှောက်သည့်အနေဖြင့် လွှင့်ထူထားခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသူက
ထဘီကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်၍ လမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေသည်ကို ဒေသခံအချို့က မြင်တွေ့ရာမှ
သတင်းပျံ့နှံ့ပြီး ည ၈နာရီခန့်တွင် Malteser အဖွဲ့နေအိမ်ရှေ့တွင်
လူရာဂဏန်းခန့် စုဝေးလာပြီး ခဲများဖြင့် စတင်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း
သို့သော် Malteser International ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Johannes Kaltenbach
ကမူ အိမ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလွှင့်ထူထားသော သာသနာ့အလံကို ၎င်းတို့ Pro-gramme
Coordinator က အဖွဲ့အစည်း၏ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့်
အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများကို မရောထွေးစေသည့် မူဝါဒအရ
ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း DVB
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လာရောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သော်လည်း လူထုအင်အားထောင်ဂဏန်းထိ
ရောက်ရှိလာပြီး အခြားအင်န်ဂျီအိုရုံးများကိုပါ ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်မှုများ
ရှိလာသည့်အတွက် ည ၁၁ နာရီ ကျော် ၁၂ နာရီခန့်တွင် သေနတ်အချက် ၃၀ ခန့်
ပစ်ပေါက်လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘အိမ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၁ ဦးကို
ခေါ်ထုတ်ပြီးပါပြီ။ မိုးပေါ်ပစ်လူစုခွဲခဲ့ရတယ်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာမရှိပါဘူး’’ဟု
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦး က မတ်လ ၂၆ ရက် ညဥ့်သန်းခေါင်ကျော်တွင်
စစ်တွေဒေသခံပြည်သူများက ယင်းနိုင်ငံခြားသူသည် သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာလုပ်
စော်ကားသည့်အတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူပေးရန် လိုလား၍
စတင်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယခင်ကပင် အိုင်အင်န်ဂျီအိုများအပေါ်
မယုံကြည့်သည့်အတွက် ၎င်း၏လုပ်ရပ်မှာ ပဋိပက္ခများကို လှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်နေကြောင်း
မတ်လ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည့် ဒေသခံများ ပြန်လည်စုဝေးလာပြီး ကုလ
လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် အိုင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ နေအိမ်များ၊
ရုံးများကို ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ
‘‘ဒီနေရာမှာစုလိုက်၊ လုံခြုံရေးတွေသွားလိုက်၊ နောက်တစ်နေရာမှာဖြစ်လိုက်ဆိုတော့
နည်းနည်း အခက်အခဲရှိပါတယ်’’ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
မတ်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှ စတင်၍ မတ်လ ၂၇ ရက် ညနေပိုင်းအထိ နေအိမ် ၃၀ ခန့်
ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ပုဒ်မ ၁၄၄
ညမထွက်ရအမိန့်ကိုလည်း အချိန်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ
‘‘ဒီနေ့အခြေအနေကတော့ အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။ အိုင်အင်န်ဂျီအိုတချို့လည်း
ရန်ကုန်ပြန်ပါ ပြီ။ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို မနက် ၆နာရီ ည ၆နာရီတိုးလိုက်တယ်’’ဟု
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က မတ်လ ၂၇ ရက်
ယူအင်န်နှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအိုများမှ ၀န်ထမ်းများအား ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ
စစ်တွေဟိုတယ်တွင် ၂၅ ဦး၊ ရဲတပ်ရင်း ရိပ်သာတွင် ၄၀ ဦးကို လုံခြုံရေးဖြင့်
စောင့်ရှောက်ထားပြီး ၉ ဦးမှာ ရန်ကုန်မြို့သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့်
ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတစ်ဦးက မတ်လ ၂၇ ရက် ည ၈
‘‘ဒီနေ့ သုံးကြိမ် သုံးနေရာလောက် မိုးပေါ်ထောင်ပစ် လူခွဲခဲ့ရပါတယ်’’ဟု
အဆိုပါ သာသနာ့အလံကို ဖြုတ်ချခဲ့သည်ဟု ဆိုသော Malteser ၀န်ထမ်းမှာ မည်သည့်
နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေး မြန်းသော်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှလည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကို
ပစ်မှတ်ထားသည့် လူအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အနည်းဆုံး
အမေရိကန်နိုင်ငံသား သုံးဦး ပါသော အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်းများကို
ဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည့် ယမန်နေ့က စစ်တွေမြို့တွင်
ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များအပေါ် လေးလေးနက်နက်စိုးရိမ်ကြောင်း မတ်လ ၂၇ရက်က
တည်ငြိမ်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှ့င် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖန်တီး
ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကို
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင်
ထို့အပြင် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့နှင့် ဗြိတိသျှသံရုံးတို့ကလည်း စစ်တွေမြို့တွင်
ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍
လေးလေးနက်နက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ကြေညာချက်အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုများဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများကို
အဟန့်အတားမရှိ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာ
အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်အနေဖြင့် အခြေအနေကို
နီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန်သံရုံးက မတ်လ ၂၇ရက်တွင်
ကုလအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ နေအိမ်နှင့် ရုံး သုံးဆယ်ခန့်
ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ အချိန်တိုးမြှင့်လိုက်မှုကြောင့် အခြေအနေ
ငြိမ်သက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖ ဦးသန်းထွန်းက မတ်လ ၂၇ ရက်
ထို့ပြင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခြောက်နှစ်အရွယ်
မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း
ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရက အတည်ပြုချက်မပေးပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကုလအပါအ၀င် အိုင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်း
ခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိပြီး အစိုးရနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာထိုး လုပ်ကိုင်နေသော
အဖွဲ့အစည်း (၁၅)ဖွဲ့ ပါဝင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တရားဝင်ပြောကြားထားသည်။
- စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားသောအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် အမေရိကန်နှင့်
ဗြိတိန်သံရုံး၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့က အခြေအနေကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း မတ်လ ၂၇
ရက်တွင် ကြေညာချက် အသီးသီး ထုတ်ပြန်သည်။
- အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ကုလနှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများ၏
နေအိမ်နှင့် ရုံး ၃၀ခန့်ပျက်စီးပြီး နိုင်ငံခြားသားများအပါအ၀င် ၀န်ထမ်း ၇၄ ဦး
လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားရသည်။
- မတ်လ ၂၇ ရက်မှစတင်၍ စစ်တွေမြို့တွင် ည ၆ နာရီမှ နံနက်၆ နာရီထိ
- အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားစဉ် လေးနေရာခန့်တွင် သေနတ်ဖြင့်မိုးပေါ်ထောင်၍
at 3/28/2014 09:08:00 PM
ဦးလနန် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
ဦးလနန်သည် ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင် ဝင်ရောက်လာပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အထိ ကျောင်းဆရာ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အထိ KIO ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အမျိုးသား ညီလာခံကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၀ အထိ KIO တွင် တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေး ဘက်သို့ရောက်ရှိပြီး KIO တွဲဖက် အတွင်း ရေး မှူး တာဝန်ယူထားသူ ဖြစ်သည်။
ဦးလနန်အား လက်ရှိ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အခြေအနေများကို ဧရာဝတီ သတင်းဌာန မြန်မာ ပိုင်း သတင်းထောက် နန်းဆိုင်နွမ် နှင့် အင်္ဂလိပ်ပိုင်း သတင်းထောက် ရင်စနိုင်းတို့က ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ KIO ဌာနချုပ် တွင် သီးသန့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ထားပါသည်။
မေး။ ။ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) နဲ့ မြန်မာအစိုးရ လက်ရှိ တိုက်ပွဲ အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ တိုက်ပွဲတွေတော့ လျော့တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီနဲ့ အမြဲ တမ်း ဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာ တိုက်ပွဲ အရှိန်၊ အကြိမ် အရေအတွက် လျော့ကျဖို့ ဆွေးနွေးတာ ရှိတယ်။ တိုက်ပွဲက နည်းတော့ နည်း တယ်။မရှိဘူး လုံးဝ ပျောက်သွားပြီတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခုဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲက ပုံစံ ကွဲပြား သွားတယ်။ အရင်တုန်းက အတင်း အဓမ္မ ထိုးစစ် ဆင်မယ်။ အခုတော့ အတင်း အဓမ္မ ထိုးစစ် ဆင်တဲ့ ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ကျနော်တို့ ရှိတဲ့ စခန်းကို အလစ် ဝင်တိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲ ပုံစံ ရှိတယ်။ တိုက်ပွဲတော့ လုံးဝ မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ မရသေးဘူး။ တိုက်ပွဲတော့ ရှိတယ်။ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ပြောင်း တယ်။
မေး။ ။ တိုက်ပွဲပုံစံ ပြောင်းတယ် ဆိုတာက ဘယ်လို ပြောင်းသွားတာလဲ။
ဖြေ။ ။ အရင်တုန်းကတော့ အင်နဲ့အားနဲ့ပေါ့။ ထိုးစစ်ကို သုံးလေးကြောင်းနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တာပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ KIA ရဲ့ ဘယ်ရှေ့တန်း စခန်း အလစ် ဝင်တိုက်လို့ ရမယ် ဆိုတဲ့ အကွက်ကျကျ စီစဉ်တာပေါ့။ တချို့ နေရာကတော့ ဝင်တိုက် ဝင်စီးပြီးမှ တပတ်နှစ်ပတ်နေ ပြန်ဆုတ် သွားတဲ့ ဟာမျိုး၊ ဒါပေမယ့် တိုက်ပွဲကတော့ ဖြစ်သွားပြီ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ လူတွေကလည်း နေရာ ဖယ် ပေး လိုက်ရတာ ရှိတာပေါ့။ သူတို့တွေ့လည်း အဲ့ဒီမှာ တပတ် တနှစ်၊ တချို့ကျတော့ တလလောက် နေပြီး ပြန်ဆုတ် သွားတယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာအစိုးရက နယ်မြေသိမ်းတဲ့ တိုက်ပွဲ ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ဝင်စီးပြီး အလစ် ဝင်တိုက်တာပေါ့။ မြန်မာအစိုးရ စစ်ကြောင်းက ကြားဝင်ပြီးတော့ ဖြတ်တိုက်တာမျိုး လုပ်တော့ သူတို့ရှိတဲ့ စခန်းကိုလည်း ကျနော်တို့ အလစ် ဝင်တိုက်ပြီး ပုံစံ ပြောင်း လာတာပေါ့။ အစိုးရ စစ်တပ်ကတော့ ခုနက ပြောသလို အားနည်းချက် အကွက်ကို ရှာပြီး ဆက်တိုက် လုပ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
မေး။ ။ အစိုးရဘက်က သစ်မှောင်ခို ရှင်းလင်းမှုကြောင့် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောတဲ့အပေါ် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိကတော့ ကျနော်တို့ KIO အဖွဲ့အစည်းကို အမျိုးမျိုး ဥပဒေ ဆန့်ကျင်ပြီး ဥပဒေ ပြင်ပမှာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြတယ် ပြောတယ်။ အမှန်တကယ် သစ်တွေလုပ်တဲ့ ကိစ္စကတော့ အခုမှ လုပ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့က သစ်တွေ လုပ်တာတွေ မရှိ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သစ်ကုန်သည်တွေ ကျနော်တို့ နယ်မြေကို ဖြတ်ရင်တော့ ကျနော်တို့ ဆက်ကြေး၊ အခွန်ကောက်တာ လုပ်တာ တော့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ ဘက်မှာလည်း အခွန် ဦးစီးဌာန ဆိုတာ ရှိပါတယ်။အခွန်ကို တင်းကြပ်တဲ့ ကော်မတီလည်း ရှိတယ်။
အခု ဒီသစ်တွေ ကိစ္စကတော့ ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ထွက်တဲ့ သစ်၊ ပိတောက်၊ တန်မလမ်း၊ ကျွန်းတွေ အပါအဝင် သစ်တွေ အားလုံး သစ်မာတွေ အားလုံးက မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွေမှာ ပေါက်တာပါ။ တဆင့်ပြီး တဆင့် ကချင်ပြည်နယ်ကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်နယ်စပ် မှောင်ခိုလမ်းကြောင်း ဖော်ကြတယ်။ ဒီလို လမ်းကြောင်းဖော်တဲ့ နေရာမှာ လမ်းကြောင်းတိုင်းမှာ စစ်တပ်တွေ ရှိတယ်။ စစ်တပ်တွေကို လာဘ်ထိုးပြီး ဖြတ်လာတယ်။ တနေ့ကို ကား အစီး ၅၀၊ ၆၀ လောက် ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ KIA တပ်က လိုင်ဇာမြို့ နန်ဆန်ယန် ကျေးရွာမှာ စခန်း အဆုံးပဲ။ ဗန်းမော် မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းမှာဆို အစိုးရ စစ်တပ်က လုံခြုံရေး ယူထားပါတယ်။ နယ်စပ်ရောက်ဖို့ အတွက် သူတို့တွေက တဆင့်ပြီး တဆင့် တက်လာတယ်လို့ သိရတယ်။ KIA ကို သစ်နဲ့ စီးပွားရှာတယ်လို့ နိုင်ငံတကာကို မြင်အောင် လုပ်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ သစ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို လက်နက်တွေ စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာကို မီးမှောင်း ထိုးပြချင်တာပါ။
မေး။ ။ သစ်မှောင်ခိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး KIO နဲ့ မြန်မာအစိုးရ တိုက်ပွဲ ဘယ်နှကြိမ်လောက် ဖြစ်သွားခဲ့လဲ။
ဖြေ။ ။ တိုက်ပွဲ အကြိမ် ၂၀လောက် ရှိပါတယ်။၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ကနေ အခုထိပေါ့။ မန်စီမြို့နယ်မှာလည်း အစိုးရက သစ်ကုမ္ပဏီ တချို့ကို ပါမစ်ပေးတာ ရှိတယ်။ သစ် ပါမစ်ပေးတယ် ဆိုတာ တော်တ်ာများများက တရုတ်ပြည်ကို ဝင်သွားတယ်။ တရုတ်ပြည်ကို သွားတဲ့ သစ်တွေဟာ အစိုးရ ပါမစ် ရပြီးသား၊ သစ်တော ဦးစီးဌာန ရထားတဲ့ ပါမစ်တွေပါ။ သစ်တွေက မန်စီမြို့နယ်ကနေ တရုတ်ပြည်ကို ဝင်တာ အကောင်းဆုံး လမ်းကြောင်းပါပဲ။ သစ်ကို အကြောင်း ပြပြီးတော့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတာပါ။
မေး။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နေတဲ့ အပေါ်မှာ KIO ရဲ့ သဘောထားက ဘယ်လို ရှိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ KIO ရဲ့ သဘောထားက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တဲ့ အခါမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အင်အား စုစည်းပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ကျနော်တို့ အမြဲတမ်း ပြောနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေက တိုက် တွန်းတဲ့ အတွက် ညီလာခံတွေ လုပ်ဖြစ်တာပါ။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးတဲ့ လမ်းစပေါ် မရောက်ရှိ သေးပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် လို့ ပြောကြပေမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်က အကောင်အထည် မဖော်သေးဘူး။ လော်ခီးလာမှာ အဓိက ဆွေးနွေးတဲ့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် မူကြမ်းကို ရေးဆွဲကြတယ်။ အဲဒီ မူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီနဲ့ ညှိကြမယ်။ ကျနော်တို့ ရေးဆွဲတဲ့ စာတမ်းကို စစ်တပ်အဖွဲ့က မလိုချင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ အဆိုးမြင် နေ တယ်လို့လည်း သိရတယ်။ KIO အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားရစရာ မတွေ့ရသေးဘူး။
မေး။ ။ KIO အနေနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးဖို့ ဖြစ်နိုင်မလဲ။ မူကြမ်းကို အတည်ပြုပြီးတဲ့ အခါ ဖြစ်နိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ အမှန်တော့ KIO ပြောထားတာက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ သွားမယ်။ နိုင်ငံရေး ညှိနှိုင်း ပြီးတော့ လုပ်သွားတဲ့ အခါ တိုက်ပွဲ ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သူဟာသူ ပြေငြိမ်းသွားပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ သွားမယ် ဆိုရင် တိုက်ပွဲတွေလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ကျနော်တို့ လက်ခံထားပါတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကိစ္စ္စဆိုတာ သူတို့အနေနဲ့လည်း အများကြီး လုပ်လာ ပြီးပါပြီ။ အကောင်အထည် ဖော်တာလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ အခုကျန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တော်တော်များများ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်တာ တော်တော် များတယ်။ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ ဆက်ဆံရေး ရုံးတော့ ဖွင့်ကြတယ်။ ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပြီး နိုင်ငံ ရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ မရှိရင် ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိဘူး။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေ ကျနော်တို့ အများကြီး ရခဲ့ပြီးပြီ။
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေး ပြေလည်သွားတဲ့ အခါမှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်စရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ KIOက ပြောဆိုချက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ညီလာခံ လုပ် လာတဲ့ အခါမှာ ကျန်တဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သဘောထားကို လိုက်လျောပေးတာတွေ လုပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုင်ဇာမှာ လုပ်တဲ့ ညီလာခံမှာ ကျနော်တို့ တဆင့်လျှော့ပေးတာ လုပ်ပေးပါတယ်။ အားလုံး တညီတညွတ် ပါဝင်ပြီး ဆွေးနွေးတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရောက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒပါ။
KIO ကနေပြီး ပြန်ပြီး ပြောတာက တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်မယ်ဆိုရင် လက်မှတ်ထိုးဖို့ မလုပ်ခင်မှာ ကျနော်တို့ မူတခု ရေးဆွဲရမယ်။ နိုင်ငံရေး မူဘောင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေး လမ်းပြမူဘောင်ပေါ့။ လက်မှတ် ထိုးပြီးတဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံ ရေး ဆွေးနွေးမှုကို ဘယ်လို အဆင့်နဲ့ လုပ်သွားကြမှာလဲ။ ဘယ်အချိန် ကာလမှာ ဘယ်လို လုပ်ကြမှာလဲ ဆိုတာ နိုင်ငံရေး လုပ် ငန်း စဉ် ရေးကြမယ်။ အဲဒီလို ရေးကြတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု မူဘောင်ကို ကျနော်တို့ဘက်ရော သူတို့ဘက်ရော လက်ခံမယ်ဆိုရင် တနိုင်ငံ လုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေး ထိုးမယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က အဆင့် လျှော့ချထားတာ ရှိတယ်။ ကျန် တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုး ထားကြတယ်လေ။ ကျနော်တို့ကလည်း သူတို့အားလုံးနဲ့ကို ဝိုင်းဝန်း လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆမှာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို အပစ်အခတ် ရပ်ဆိုင်းရေး ဆိုတဲ့အဆင့် လျှော့တဲ့ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ထိုးကြမယ်။ မထိုးခင်မှာ ဘာကို သဘောတူ ထားကြမယ်ဆိုရင် ထိုးပြီး နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ရမယ့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု လမ်းပြ မူဘောင် ရေးဆွဲကြမယ်။
မေး။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ကိစ္စမှာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ပါဝင်လာဖို့ရော ဘယ်လို စဉ်းစားထားလဲ။
ဖြေ။ ။ KIO အဖွဲ့အစည်းကတော့ နဂိုကတည်းက ပြောဆိုနေတဲ့ ဒီဆွေးနွေးမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ တွေ့ကြမယ် ဆိုတာကို ဈေးဆစ် တာ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်မှာလဲ ဆွေးနွေးတဲ့ အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဖွဲ့ထားမယ်။ အစိုးရ ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံတော်ကနေ တဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုရင် ဘယ်အဖွဲ့မဆို တွေ့မယ်ဆိုတာ လုပ်ထားပါတယ်။ ဦးအောင်မင်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံ တော် အဆင့် ကော်မတီ ဖြစ်တယ်လို့ နားလည် ထားတယ်။ ပြောဆိုမှု ဆွေးနွေးချက် အားလုံးဟာ အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စား ပြောဆို ဆွေးနွေးချက်လို့ သဘောထားတယ်။ တကယ်လို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ပါမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ဘက်က ဆွေးနွေးမှာပါ၊ မပါဘူးဆိုရင် ဆက်ပြီး သွားမှာပါ။
မေး။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ စစ်တပ် အခန်းကဏ္ဍ မပါလာဘူး ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လောက် အထိ ထိန်းသိမ်း ထား နိုင်မှာလဲ။
ဖြေ။ ။ အခုထိ ဦးအောင်မင်း လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စပေါ်မှာ စစ်တပ်ကနေ သဘောထား မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ ထောက်ခံ တာ မတွေ့ရသေးဘူး၊ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ စစ်တပ် အနေနဲ့ အင်တိုက် အားတိုက် သဘောထား ပြည့်ပြည့်ဝဝ မပါဘူး ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တခုက ဒီဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်ကာလမှာ သူတို့ စစ်ကြောင်းတွေ စစ်ဆင် ရေး တွေ လှုပ်ရှားတာ အမြဲတမ်း အပြည့် ရှိနေတယ်၊ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တော့မယ် ဆိုတာနဲ့ တပတ်အလိုမှာ စစ်ကြောင်းတွေ လှုပ်ရှားတာ အမြဲတမ်း ရှိတယ်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး ပါတယ် ဆိုတာကလည်း နိုင်ငံတကာ ကြည့်ကောင်းအောင် ပါတဲ့ သဘောပါ၊ ဒါကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အပေါ်မှာ သဘောထား ပြည့်ပြည့်ဝဝ မပါသေးဘူး။
မေး။ ။ သမ္မတက ၂၀၁၄ မှာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုကို ဘယ်လို မြင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိက လက်မှတ်ထိုးတယ် ဆိုတာ စာချုပ်ပေါ် ထိုးတာပါ။ ဘယ်နှကြိမ် ထိုးထိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန် တကယ်ပဲ ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ ဖြေရှင်းမယ့် ဆန္ဒက အခုထိ မတွေ့ရသေးဘူး။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အပေါ်မှာထားတဲ့ သူတို့ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေက အပြင်း အထန် လုပ်နေကြတယ်၊ တကယ်လို့ KIO ကနေ ပြီးတော့ ထိုးစစ်ဆင်မှုကို ပိတ်ပင်တာ မလုပ်ဘူး ဆိုရင် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ပြီး တော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်နေမှာပါ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄မှာလဲ ဖြစ်နေမှာပါ၊ သူတို့ဘက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် မဖြစ်အောင် လော်ခီးလာ ညီလာခံကနေ တဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ အဆင့်မြင့် လာမယ် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက် မျှော်လင့်ချက် ရှိတော့ မလုပ်တာပါ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လက်မှတ် ထိုးကြမယ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲတာ အားလုံး ပြီးသွားပြီ ဆိုတာမျိုး ပြောနေပေမယ့် လက်မှတ် မထိုးခင်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ယုံကြည်လာနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ချက် တခုမှ မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် လက်မှတ် ထိုးတယ် ဆိုတာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက သိပ်ပြီး မျှော်လင့် တောင်းတတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ အမှန် တကယ် ကျနော်တို့ဟာ ဘာတွေ ပြောဆို ဘာတွေ ဆွေးနွေး ကြမယ်ဆိုတာ အဓိက အချက်ပါ။ ပထမ လက်မှတ်ထိုးမယ့် အဆင့် တောင်မှ စစ်တပ်ကနေပြီး သူတို့သဘောဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေ ကြားသိရတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြောပါ။ လက်မှတ် ထိုးတယ် ဆိုတာ စာရွက်ထဲမှာပဲ ဖြစ်သွားပြီး ဘာမှ တန်ဖိုး မရှိဘူး။
အခုထိ လက်မှတ် ထိုးဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ အခု အစိုးရ နေပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကနေ မျက်နှာပန်း လှသွားမယ်၊ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာတော့ ဘာမှ အကောင်အထည် ဖော်လာ နိုင်စရာ မရှိပါဘူး၊ တကယ်လို့များ အမှန်တကယ်ပဲ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးကို ပြည့်ဝတဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင် စစ်ဆင်ရေး အင်အားတွေ လျှော့ချ သင့်တယ်။ ကျနော် တို့ ဦးအောင်မင်းနဲ့ တွေတဲ့ နေရာမှာ ကြိမ်ဖန်များများ လုပ်နေပေမယ့် စစ်တပ်က အသင့်ပုံစံ များများ လုပ်နေကြတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြောနေပါစေ၊ တဖက်မှာ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုတွေက နဂိုပုံစံပဲ ဖြစ်နေတော့ သိပ်ပြီးတော့ ထူးခြားမှု မရှိဘူး။ အဓိကတော့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အာဏာရ အဖွဲ့အစည်းတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပြေပြေလည်လည် ဖြေရှင်းကြဖို့ ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အမှန်တကယ် သူတို့ဘက်က စိတ်ဆန္ဒ ဖြူစင်တယ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ်ဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ အားလုံးက ဒီမြန်မာ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေပါပဲ။ သူစိမ်းတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ လူတွေပါ။ တိုင်းရင်းသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒကို တိတိကျကျ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မရှိတာ ကြောင့်မလို့ ဒီအချိန်ကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခန့်မှန်းရ ခက်တယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်လို့များ ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာဏာရအစိုးရ ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းသွားမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာက လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီကို ကိုယ်စားပြု ဒီအစိုးရ လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ခန့်မှန်းလို့ မရသေးပါဘူး။
မေး။ ။ လက်ရှိ တရုတ်ပြည် အခန်းကဏ္ဍရော ဘယ်လို ရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ ဆွေးနွေးမှု အပိုင်းမှာ တရုတ် အစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုက မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ မရဘူး။ ဖိအား အများကြီး ပေးတယ်။ တိုက်ပွဲ ပြင်း ထန်တဲ့ အချိန်မှာ တရုတ် အစိုးရက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး မြန်မြန်လုပ်ဖို့လာပြီး ဖိအားပေးတာ ရှိတယ်။ သူတို့က ဖြစ်နေတဲ့ တိုက် ပွဲ ဟာ နိုင်ငံရေး ပြည်တွင်းစစ် ဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရ နားလည်တာက သူတို့ နယ်စပ်ထဲမှာ တည်ငြိမ်ဖို့ တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ဘူး၊ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်သွားတဲ့ အခါမှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အနေနဲ့ အများကြီး ကုန်သွယ် လာမယ်၊ ကုန်သွယ်မှု တိုးလာ မယ် ဆိုတာပဲ ရှိတယ်၊ အခု ဖြစ်တာကတော့ စီးပွားရေး မပြေလည်လို့ ဖြစ်တာပဲလို့ ခံယူထားတာလို့ပဲ ထင်တယ်။
အဲဒါကြောင့် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်လာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ကနေ မြန်မာအစိုးရကို ပြောကို ပြောရမယ်၊ မလုပ်ပါနဲ့ စစ်ဆင်ရေး လျှော့ရမယ် ဆိုတာမျိုး ပြောရမယ့် အစား၊ ကျနော်တို့ KIO ကို လာပြီးတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး မြန်မြန်လုပ်ဖို့ ဖိအား လာပေးတယ်။ ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီအစိုးရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုမှာ တရုတ်အစိုးရက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပါဝင်နေတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
အဲဒီ နောက်ပိုင်း၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးမှု လုပ်တိုင်း နိုင်ငံတကာကနေ အသိသက်သေ ပါဝင်ဖို့ ပြောဆိုတိုင်း တရုတ် အစိုးရက သူလက်လွတ်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ သူတို့ အာရှရေးရာ မရမက ထည့်တာ ရှိတယ်။ ဒါလည်း ဆွေးနွေးမှု လမ်းစဉ်ပေါ်မှာ သူတို့ သဘောထားကို ပေးနိုင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့် သဘောထားတယ်လို့ ခန့်မှန်းလို့ ရတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဆွေးနွေးမှုမှာလည်း သူတို့တွေ အမြဲဝင်ပြီး နားထောင်ပါတယ်။
တရုတ် သဘောထားက ဘာလဲ ဆိုတော့သူရဲ့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ လမ်းစဉ်က ရှိပြီးသား၊ ပြင်ပအရေးမှာ မပါဝင် မပြောဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယ်။ အဓိက နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒပေါ့၊ သူတို့ တရုတ်နယ်စပ် တလျှောက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ မရှိဖို့ ရည်ရွယ်ချက် တခု၊ နိုင်ငံရေး ဘယ် လို ပြေလည် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သဘောထား ရှိပုံ မရဘူး။ ဒါကြောင့် ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ကြားနေပြီးတော့ စောင့်ကြည့်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပါဝင်ချင်တဲ့သူ တော်တော်များများ ရှိတယ်၊ ဂျပန်ကလည်း ပါချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အနီးဆုံး ဆက်ဆံ နေရတာက တရုတ်နိုင်ငံလို့ ပြောရမယ်။
တရုတ်ပြည် အဝင်အထွက် KIO သာမက ကချင်ပြည်သူ အားလုံး ဒီနယ်စပ်ကူးပြီး ဆက်ဆံ နေရတော့ ကြည့်ရတာ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဂျပန်တွေ ပါဝင်ဖို့ ကိစ္စတွေ အပေါ်မှာလည်း ကျနော်တို့ အများကြီး သူတို့ကို ညင်သာစွာ ကန့်ကွက်တဲ့ သဘော လုပ်ရတယ်။ နောက်ပြီး အိန္ဒိယ အစိုးရက ပြောလာတယ်။ တရုတ်တောင် ပါတာပဲ ကျနော်တို့လည်း နယ်စပ် နိုင်ငံပဲလေ။ အိန္ဒိယကို ခေါ်ပါလို့ ပြောလာတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယကိုလည်း ညင်သာစွာ ငြင်းခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ ကျနော်တို့ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ပေါ့၊ အမြဲတမ်း ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်နဲ့ ဆိုတော့ ဆက်ဆံပြီး သွားတော့ ကျနော်တို့ လက်ခံရတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကြောင့် တွေ့ဆုံမှု အပိုင်းကတော့ တရုတ်ရဲ့ ပါဝင်မှု အများကြီး ပါလိမ့်မယ်။
တရုတ် အစိုးရရဲ့ ဖိအားပေးမှု ပိုခံရမှာ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေပါ။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဆန္ဒကို သူတို့က ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိအားပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြောဆို သွားတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကြားနေပြီး ဖျန်ဖြေပေးတာမျိုး၊ ကြားနေ ဝင်ရောက် ပြောဆိုတာမျိုး၊ အခုထိ မတွေ့ရသေးဘူး။ အမြန်ဆုံး လက်မှတ် ရေးထိုးဖို့ ကိစ္စပဲ ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့ KIO နောက်ကျ ကျန်ခဲ့မယ်။ သူများတွေ တွေ့ပြီးကုန်ပြီလို့ ပြောတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီး သွားမယ့် ဆွေးနွေးမှု လမ်းစဉ်ကတော့ တရုတ် အစိုးရကလည်း ကြားကနေ နားထောင်လုိ့ ရမယ့် အဆင့်ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ သူတို့ဆီကလည်း မျှော်လင့်ချက် မရှိဘူး ။
မေး။ ။ စစ်တပ်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပြီးရင် နယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ KIO အုပ်ချုပ်တဲ့ နေရာကို နိုင်ငံတော် အာဏာ လွှမ်းစေချင်တဲ့ သဘောလား။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ပြီး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အရင်တုန်းက နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ဖို့ ဖိအားပေးတာ အဲဒီလို သဘောပါ။ အခုကျနော်တို့က ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဝိုင်းပြီး တည်ဆောက်ဖို့ ပြောနေကြတယ်။ ဒါဟာ တောင်းဆိုမှု အသစ် လည်း မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောထား ဖလှယ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ အပိုင်းပါ။ အဲဒီဟာကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ အခု ပြောနေတာပါ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဘယ် အဖွဲ့ အစည်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေ ကိုယ့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှု ကိုယ့်ရဲ့ယန္တရားတွေနဲ့ ရှိနေရတာပဲ။ ကျနော် တို့ KIOကလည်း အစိုးရငယ် ပုံစံ တခုပါပဲ။ ပညာရေး ဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန နယ်စပ် အဝင်အ ထွက် အားလုံး က ကိုယ့်လူထုနဲ့ ကိုယ်အုပ်ချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပဲ လုပ်နေတာပါ။ ဒါမျိုး လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ ဒေသမှာရှိတဲ့ လူထု၊ ဒေသခံ လူထုကို ဖိနှိပ်ဖို့ လုပ်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး လက်မှတ် ရေးထိုးတာနဲ့ ဥပဒေရဲ့ အောက်မှာ ရောက်ရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ တရား ဥပဒေ ဘောင် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့ဆိုပြီး မတရား သွတ်သွင်း လိုက်တယ်။ တရား ဥပဒေဘောင် အတွင်း အခု လက်မှတ် ရေးထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေ အားလုံးကလည်း တရားဥပဒေဘောင် အတွင်းလို့ ပြောတာ ဘယ်သူမှ လက်မခံဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အတိုင်း သွားမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ လက်မခံပါဘူး။ ကျနော်တို့ KIO အဖွဲ့အစည်းဟာ တရားဥပဒေဘောင် အတွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း ၁၇ ဖွဲ့ထဲမှာ မပါဘူးလို့ အကြောင်း ပြန်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ လက်မှတ်တောင် မထိုးသေးဘူး။ နောက်ထပ်လည်း အခုက စပြီး ပြည်ထာင်စု အဆင့် ဆွေးနွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဥပဒေ ဘောင် အတွင်းသို့ ရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသား မရှိဘူး။ အဲဒီလို လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုက အားလုံးကို သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု လမ်းကြောင်း၊ သူတို့ ညွန်ကြားချက် အတိုင်း ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့သဘော ပါတာပေါ့။
By irrawady blog